Iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra eto Slovenia ny Mount Vogel. Hiantsoroka azy io, ireo mpizaha tany dia afaka mahita ny tontolo malaza be: ny fomba fijery mahavariana momba ny Farihy Bled dia manokatra, ary eo an-tampon'ny tendrombohitra no misy ny tranokalan'ny Bled fahiny. Ny malaza dia malaza fa tsy noho ny toetrany malaza, fa koa ho an'ny toeram-pialan-tsambo malaza any amin'io faritany io.
Vogel - famaritana
Ny toetr'andro ao amin'ny foibe fisakafoan'i Vogel no fomba tsara indrindra hitsidihana ny toerana amin'ny ririnina sy amin'ny fahavaratra. Afaka manao dia mahafinaritra ianao mandritra ny vanin-taona mafana, amin'ny alàlan'ny toeram-pialan-tsasatra fizahantany mpizahatany Vogel Trail, mandalo ala maitso, fantatra amin'ny anarana hoe Lopata. Misy dia tsy dia mahazatra ihany koa dia fitsangantsanganana eny an-dàlambe, manomboka amin'ny toerana avo indrindra izay afaka mankafy ilay toetra mahafinaritra.
Amin'ny ririnina, afaka mitsidika ny foibe fisakafoana any Vogel ianao ary manokana ny fotoanao amin'ny asa tianao indrindra - skiing na snowboarding. Vogel manondro ireo toeram-piantsonana, izay noho ny toetr'andro, afaka mandeha bisikileta amin'ny Desambra hatramin'ny tapaky ny Aprily. Izany dia satria ny tendrombohitra Vogel dia anisan'ny sakana voalohany eo amin'ny Ranomasina Adriatika, noho izany dia mianjera ny oram-panala. Ny toetra iray hafa dia ny alahelon'ny toetr'andro mazava tsara.
Ny toerana misy ny toeram-pialan-tsambo ao Vogel dia ny Alpen Juliana, any akaikin'ny tanàna no misy ny tanànan'i Bohinj. Ny mpankafy ny fanatanjahantena ara-drariny sy fialamboly dia afaka mandany fotoan-tsandry amin'ny iray amin'ireto kilasy manaraka ireto:
Fiaran-dalamby mamakivaky ala na fiantsonan'ny fiaramanidina;
Mianjera amin'ny snowboard;
Fanatrehana fitsidihana any amin'ny Vogel Snow Park;
Misy zana-paritra manokana ho an'ny ankizy.
Vogel dia mamorona ireo mpizahatany ireo fepetra rehetra ilaina mandritra ny fotoana mahafinaritra. Ho an'ity fikasana ity, misy serivisy fampiasana ski, ny fahafahana hampiasa ny serivisy mpampianatra izay mampianatra any amin'ny sekoly amboara kely sy sekoly amboara. Amin'ny hariva, afaka mitsidika toeram-pisakafoanana any an-toerana ianao, café, clubclubs.
Ny toeram-pialan-tsambo Vogel (Slovenia) dia anisan'ny toeram-pialan-tsambo ao Bohinj, izay ahitana ny toeranan'i Kobla ihany koa. Avy any otley any Bohinj, misy bisy maody malalaka mankany amin'ny fandevenana. Centre Vogel manana toetra miavaka toy izao:
Ny haavon'ilay tanàna amin'ny haavon-dranomasina dia 1231 metatra.
Ny skiing dia miovaova amin'ny 569 hatramin'ny 1800 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina;
Ny lalamby dia 18 km ny totaliny, anisan'izany ny làlana "mainty" ho an'ny matihanina.
Ny toeram-pitsangatsanganana dia misy fitaovana 9, anisan'izany ny fiaramanidina sy ny fiaramanidina ary ny lakana.
Ireo mpizahatany izay nanapa-kevitra ny hitsidika an'i Vogel, dia aleo mankany amin'ny toeram-ponenana Bohinj, izay misy fiara fitateram-bahoaka avy ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Ljubljana . Avy any amin'ny faritra izay misy hotely ao Bohinj, fiara maimaim-poana no mihazakazaka mankany Vogel.
Fivarotana any Ljubljana
St. Catholics Cathedral
Mitondra amin'ny volom-behivavy
21 tokana: olona izay toa tsy misy toa azy
Macaulay Kalkin dia niresaka tamim-pahatsorana momba ny fahazazany sy ny fifandraisany tamin'ny rainy
Ny ascorbic amin'ny glucose dia tsara sy ratsy
Karazana kaki - amin'ny inona ny loko mifintina?
Kanseran'ny alikaola amin'ny zaza - fitsaboana
Silikônina amin'ny volo
Siphon ho an'ny rivotra
Fa-spa amin'ny fampinonoana
Sakafo mitahiry karipetra
Vera Brezhnev tsy misy fananganana